Maxaa ka jira in ciidamada DF ay ka baxeen Ceeldheere? | Dalkaan.com
Home Warkii Maxaa ka jira in ciidamada DF ay ka baxeen Ceeldheere?
Ceeldheere (dalkaan) – Guddoomiyaha Deegaanka Ceeldheere ee Gobolka Galgaduud ayaa beeniyey warar sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka baxeen deegaankaas.
Deegaanka Ceeldheere ayaa muhiim u ah qorshaha ay ciidamada dowladda iyo Galmudug dib ugu qabsanayaan magaalada Guriceel, oo 35 u jirta deegaanka, islamarkaana ay hadda gacanta ku hayaan ciidamo taabacsna kooxda Ahlu-Sunna Walajmaaca.
Guddoomiye Cabdullaahi, oo la hadlay idaacadda Mustaqbal ee Muqdisho, ayaa yiri “Ciidamada ammaanka way joogaan Ceeldheere, waa beena buur wararka sheegaya in ay isaga baxeen deegaanka, waxa ay isku sii ballaariyeen deegaanno horleh.”
“Sidoo kale waa been abuur wararka sheegaya in khilaaf uu soo kala dhexgalay ciidamada ku sugan Ceeldheere sidaasna ay uga baxeen deegaanka. Ciidanku waa ay ka amar qaataan dowladda, ma jiri karo is maandhaaf soo kala dhexgeli karo maadaama hal hadaf ay ku socdaan,” ayuu yri Guddoomiye Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug ayaa qorsheynaya inay weeraraan Guriceel, kadib markii odayaasha beesha degta Guriceel ay xalay sheegeen inay ku fashilmeen dhex-dhexaadin ay isku dayeen inay ku baajiyaan dagaal ka dhaca magaalada, ayaga oo eedeeyey hoggaamiyaha Ahlu-Sunna Sheekh Shaakir.
Ciidamada ku sii jeeda Guriceel ayaa isugu jira Kumaandooska Gorgor, Guutada 15aad ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka iyo Nabad Sugidda Galmudug.
Previous articleOle Gunnar Solskjaer oo ka Hadlay in Cristiano Ronaldo looga tago Keydka
Next articleXildhibaan SIR David Amess oo u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray weerarka
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Ururada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ayaa walaac xoogan ka muujiyey doorashada Golaha Shacabka oo dhawaan si hordhac ah uga bilaabatay magaalada...
Hordhac: Elche Vs Real Madrid ee Horyaalka La liga-ga, Xidigaha Maqan...
Hordhac: Chelsea Vs Juventus ee Champions league-ga Guruub H, Wararka Labada...